Wararka - Maxaa dhacaya haddii aad isticmaasho ogsijiinta oo aadan u baahnayn?
Jidhkaagu ma noolaan karo la’aanta ogsajiinta aad ka neefsato hawada. Laakiin haddii aad qabto cudurka sambabka ama xaalado caafimaad oo kale, waxaa laga yaabaa inaadan ku filnayn. Taasi waxay kugu reebi kartaa neefsasho la'aan waxayna dhibaato ku keeni kartaa wadnahaaga, maskaxdaada, iyo qaybaha kale ee jirkaaga.
Marka xubnaha qoysku ay la kulmaan cidhiidhi feeraha iyo hypoxia, waxa ugu horreeya ee qof kastaa ka fikiro waa inuu isbitaalka aado. Laakiin markaad isbitaalka tagto, waxaad ogaan doontaa inaadan xataa saf u geli karin. Waqtigaan, waxaa si gaar ah muhiim u ah in guriga lagu diyaariyo koronto -dhaliyaha oksijiinta. Hadda oo tiknoolijiyadda jiilka oksijiin ee shaandhaynta molecular si weyn loo adeegsaday, uma baahnid inaad isbitaalka u tagto neefsashada oksijiinta. Waxaad si sahal ah ugu nuugi kartaa oksijiin guriga adiga oo wata koronto -dhaliyaha oksijiinta guriga. Haddaba imisa litir ayaa ku habboon koronto -dhaliyaha oksijiinta guriga?
Waqtigan xaadirka ah, isku -uruuriyeyaasha oksijiinta qoyska ee caadiga ah ee suuqa ku yaal waxay leeyihiin 1L, 2L, 3L, iyo 5L ururiyeyaal oksijiin oo leh calaamado kala duwan oo oksijiin ah. Midka weyn ma ka fiican yahay? Dabcan maya. Xulashada urursiga oksijiin ee guriga wuxuu ku salaysan yahay caafimaadka jirka iyo baahiyaha isticmaalaha. Tusaale ahaan, dadka aadka u yar hypoxic oo kaliya u isticmaala ujeeddooyin daryeel caafimaad, uma laha shuruudo gaar ah xaddiga iyo uruurinta oksijiinta. Kaliya dooro mashiinka hal litir ah ee suuqa. Laakiin dadka qaba hypoxia ba'an oo u baahan 24 saacadood maalintii daryeelka caafimaadka iyo neefsashada oksijiinta, waxay leeyihiin baahiyo gaar ah oo ku aaddan uruurinta iyo socodka oksijiinta. Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto koronto-dhaliye leh 24-saac wax-soo-saar oksijiin oo joogto ah iyo qaylo-dhaan urursiga oksijiinta. Guud ahaan, waxay inta badan ku salaysan tahay mashiin saddex litir ah ama mashiin leh soo saaridda hawada sare iyo fiirsashada oksijiinta. Isticmaalka gaarka ahi wuxuu u baahan yahay dhakhaatiir xirfadlayaal ah si ay u hagaan daaweynta oksijiinta.
Markaan dooraneyno urursiga oksijiin ee guriga, waa inaan sameynaa go'aan ku saleysan xaaladda isticmaalaha, mana sameyn karno doorasho indho la'aan ah. Waxaa jira aqoon badan oo ku habboon oo ku saabsan arrimaha gaarka ah ee uruuriyaha oksijiinta iyo daaweynta oksijiinta ee Internetka, iyo kan ugu fiican ee Internetka waa uruuriyaha Oxygen ee Gravitation Medical. Gravitation Medical waxay leedahay waayo -aragnimo R&D tobanaan sano ee warshadaha uruurinta oksijiinta, xoog farsamo oo xoog leh, iyo urursanayaal kala duwan oo oksijiin ah oo leh astaamo qulqulka oksijiinta oo kala duwan, kuwaas oo dabooli kara baahiyaha kooxo kala duwan oo dad ah.